Indlu yaseFama yaseBadesti, eTransylvania
Vultureni , Cluj, Romania
Ifama sinombuki zindwendwe onguCamelia
UCamelia unezimvo eziyi-33 zezinye iindawo.
Indlu yasefama ipholile, ihonjiswe ngemizobo yoqobo, i-tv, i-cd-radio, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, ivenkilana eseyadini kunye negadi. Ibekwe kwindawo ezolileyo, kufutshane nehlathi.
Indlu imi eBadesti, ilali imizuzu engama-30 ngemoto ukusuka Cluj-Napoca, Transilvania, Romania kunye 20 imizuzu ukusuka International Airport 'Avram Iancu' Cluj-Napoca. Iquka amagumbi amabini okulala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela, inegaraji, iigadi zemifuno ezi-2 kwaye ijikelezwe ngamabhoma eziqhamo. Emva kwendlu kukho i-pyre kwaye kukho iihagu kunye neenkukhu kunye nenkunzi yenkomo kunye nenkomo.
Ilali incinci kakhulu enabantu abalungileyo, kude kuyo nayiphi na ingxolo, ithule kakhulu kwaye ijikelezwe ngamahlathi kunye nemibono emihle. Abamelwane banobuhlobo kwaye baluncedo kakhulu. Kucetyiswa ngonyango kwindalo kunye nendlela yobubele kumhlaba kamama. Kunconywa ukubaleka kubomi bemihla ngemihla kunye nokukhawuleza kweedolophu, kwindawo ethule kakhulu, enomoya omtsha, amanzi omthombo kunye ne-oxygen ion ukusuka kumahlathi ajikelezileyo.
Kule lali kukho ilitye lesikhumbuzo lembali, iCawa yeReformed-Calvian yenkulungwane ye-13 (eyayiyiRoma Katolika), kwaye kukho amabhodlo akufutshane enqaba yaseDabaca.
Kukho kuphela i-20 km ukuya eBontida, apho ikhoyo umthendeleko womculo wonyaka we-ELECTRIC CASTLE, kunye ne-40 km ukuya eCluj-Napoca (UNTOLD, TIFF, ZILELE CLUJULUI). Imoto iyimfuneko kuzo zombini iindawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Camelia
Sifumaneka kwimibuzo ngefowuni, i-imeyile okanye umyalezo. Iindwendwe ziya kwamkelwa.